July | 2016 | Indrenionline.com | Page 5
Monthly Archives: १५ श्रावण २०७३, शनिबार १०:१७
बास्टिन स्वाइन्स्टाईगरद्धारा सन्यासको घोषणा
काठमडौ १५ साउन । विश्वकप फुटवल विजेता जर्मनीका कप्तान बास्टिन स्वाइन्स्टाइगरले अन्तराष्ट्रिय फुटबलबाट सन्यासको घोषणा गरेका छन । मिडफिल्डर स्वाइन्स्टाइगरले सामाजिक सञ्जालमार्फत सन्यासको घोषणा गरेका हुन्। सन्यास लिएको घोषणा गर्दै उनले आफुले मुख्य प्रशिक्षकलाई अब राष्ट्रिय टीममा आफुलाई छनोट नगर्न भनिसकेको बताउनु भयो । उनले आफ्ना समर्थक, राष्ट्रिय टीम, फुटबल संघ लगायत सबैलाई धनयवाद दिएका छन् । ३१ वर्षे मिडफिल्डर सन् २०१४ मा ...
नयाँ शक्तिका संयोजक भट्टराई दाङ आउने
तुलसीपुर १५ साउन । नयाँँ शक्ति नेपालका संयोजक डा।बाबुराम भट्टराई दाङ आउन लागेका छन् । नयाँ शक्ति नेपालको प्रदेश स्तरिय भेलालाई सम्बोधन गर्न भट्टराई दाङ आउन लागेको नयाँ शक्ति नेपाल प्रदेश नंबर ५ का संयोजक सुरेन्द्र चौधरीले जानकारी दिए । भेला आईतबार बिहान ११ बजे घोराही नगरपालिकाको सभाहलमा हुने चौधरीले जानकारी दिए । यसैबिच डा. भट्टराई सोमबार तुलसीपुर नगरसमितीको आयोजना ...
हिलारीलाई पहिलो झड्का , चुनाव प्रचार सामग्री ह्याक
अमेरिका १५ साउन । अमेरिकामा नोबेम्बरमा हुने राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि डेमोक्रेटिक पार्टीकीे उम्मेदवार हिलारी क्लिन्टनको प्रचार अभियानसँग जोडिएका जानकारी ह्याक भएको छ । यो डेमोक्रेटिक पार्टीमाथिको अहिलेसम्मकै ठूलो साइबर आक्रमण रहेको अमेरिकी सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् । साइबर आक्रमणमा रुसी सरकारका लागि काम गर्ने एजेन्टको हात रहेको अमेरिकी अधिकारीले बताएका छन् । रुसले अमेरिकामा हुने राष्ट्रपति चुनावलाई प्रभावित गर्न खोजेको आशंका ...
डा. गोविन्द केसी आफै प्रदर्शनमा उत्रेपछि
काठमडौ १५ साउन । स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारको अभियानमा लागेका डा। गोविन्द केसीको अगुवाईमा आज काठमाडौको माइतिघर देखि बानेश्वरसम्मा प्रदर्शन जारी रहेकोे छ । डाक्टर केसीसँगै हिँडौं, भ्रष्टाचार बिरुद्ध उत्रौं’ भन्ने आह्वानका साथ प्रदर्शन भइरहको हो । आज संसदीय सुनुवाइ समितिका अध्यक्ष र सदस्यहरूलाई अख्तियार प्रमुखले गरेका कार्यको सानो फेहरिस्त लिखित र सांकेतिक रूपमा बुझाउन डा केसी टोली प्रदर्शन उत्रिएको हो ...
न्यायाधीश नियुक्ती प्रक्रिया आइतबार टुङ्गिदै
काठमडौ १५ साउन । सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित ११ न्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रिया भोली टुङ्गिने भएको छ । व्यवस्थापिका–संसद्, संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको भोली बिहान हुने बैठकले प्रस्तावित न्यायाधीशको उपयुक्तता वा अनुपयुक्तताबारे निर्णय गर्नेछ । गत बुधबार र बिहीबार समितिले प्रस्तावित न्यायाधीशको सुनुवाइ पूरा गरे पनि निर्णय भने गरेको थिएन । हिजो काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक बिदा परेकाले समितिको बैठक स्थगन भएको थियो । ...
नेपाल भारत बीचको सम्बन्ध पुनरावलोकन गर्नु पर्छ – भटराई
काठमडौ १५ साउन । नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा। बाबुराम भट्टराईले नयाँ सन्दर्भमा नेपाल–भारतबीचको सम्बन्धमा पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । आज बिहान धनगढीमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा उहाँले दुई देशबीचको सम्बन्धमा पुनरावलोकन गर्न भारत तयार रहनुपर्ने भन्दै नेपाल–भारतबीचको सम्बन्धमा पुनरावलोकन गर्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो । संयोजक भट्टराईले विगतमा राजनीतिक अस्थिरताका कारण नेपालले पनि पहल लिन नसकेको र भारतले पनि सकारात्मक ...
दिपक बोहरा दाङ १५ साउन । दाङका किसानहरु गड्यौलाबाट उत्पादन हुने अग्र्यानिक मलतर्फ आर्कषित हुँदै गएको पाईएको छ । हाल दाङका सिमित स्थानहरुबाट उत्पादन भईरहेको गड्यौला मलको सकरात्मक प्रभाब देखेपछि किसानहरु यसप्रति आर्कषित भएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय दाङले जनाएको छ । पछिल्लो पछिल्लो समय अग्र्यानिक ( गड्यौला मल ) को बरेमा बुझ्न धेरै किसानहरु कार्यालयमा आउने गरेको जिल्ला कृषि ...
मोर्चालाई मनाउन कार्यदल गठन
काठमाडौं– नयाँ सरकारमा मधेशी मोर्चालाई सहभागी गराउने विषयमा काँग्रेस, माअ‍ोवादी र मोर्चाका नेता सहभागि रहेको कार्यदल बनेको छ । कांग्रेस, माओवादी र मधेशी मोर्चाको संयुक्त बैठकले यस्तो कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको हो । बैठकले राजनीतिक समझदारी बनाउनका लागि काँग्रेस, माअ‍ोवादी र मोर्चाबाट ३-३ जना रहेको एक टिम निर्माण गरेको छ । रातोपाटी बाट
केसीले उठाएका मागमा आज युवाहरुको प्रदर्शन
भ्रष्टाचार अन्त्य र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारको माग गर्दै आज युवाहरुले प्रदर्शन गर्ने भएका छन् । डा‍. गोविन्द केसीको अगुवाईमा आज काठमाडौंमा प्रदर्शन गर्न लागिएको हो । केसीको समर्थनमा अभियान चलाउँदै आएका युवाहरुको आह्वानमा प्रदर्शन आज बिहान ११ बजेपछि काठमाण्डुको माइतिघर मंडलामा प्रदर्शन हुन लागेको हो । ‘डाक्टर केसीसँगै हिँडौं, भ्रष्टाचार बिरुद्ध उत्रौं’ भन्ने आह्वानका साथ प्रदर्शन हुन लागेको युवाहरुको समुहले ...
आज भोली के गर्दै हुनुहुन्छ ? म साहित्यको विद्यार्थी हुँ,साहित्य साधना मेरो आजिवन पेशा हो । साहित्य अध्ययन र लेखनमा मेरो अधिकतम समय बित्छ । कला,साहित्य र संगीतको संरक्षण ,संबर्धनका लागि र समाज सेवाका लागि विभिन्न संघ संस्थामा नेतृत्वदायी भुमीकामा रहि क्रियाशिल छु । एन.जि.ओ कर्म मेरो अर्को पेशाहो,त्यहाँको नियमित कार्य सम्पादनमा पनि ब्यस्त रहन्छु । अध्ययन,अनुसन्धान र सञ्चार क्षेत्रमा क्रियाशिल ...